आहा आलिताल ! सोलार बत्ती जोडिदै, पूर्वाधार थपिदै - Mahendranagar Post
Home अन्य घुमफिर आहा आलिताल ! सोलार बत्ती जोडिदै, पूर्वाधार थपिदै
आहा आलिताल ! सोलार बत्ती जोडिदै, पूर्वाधार थपिदै
राम धामी, डडेल्धुरा– भित्रिमधेशको आलिताल गाउँपालिकास्थित पर्यटकीय गन्तव्य आलिताललाई अब रातमा पनि अवलोकन गर्न सकिने भएको छ। गाँउपालिकाले सोलार बत्ती जडान गरेर आलिताललाई रात्रीकालिन समयमा पनि सहजै अवलोकन गर्न सकिने बनाउन लागेको हो।
सोलार बत्तीका लागि चालु आर्थिक बर्षमा बजेट बिनियोजन गरिएको र चाँडै निर्माण कार्य थालिने आलिताल गाँउपालिकाका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले बताए। तालको चारै तिर सोलार वत्ती जडान गरेर ताल क्षेत्रमै बस्न मिल्ने गरी सो क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका पुर्वाधारहरु विकास गरिन लागेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
चालु आर्थिक बर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आलिताल क्षेत्रको विकासका लागि केही रकम बिनियोजन गरेको र आलिताल गाँउपालिकाले १५ लाख बराबरको बजेटमा उक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय पुर्वाधार विकासका काम गरिने भएको छ। आलिताल क्षेत्रमै क्याम्पिङ गरी रातीको समयमा समेत अवलोकन गर्न सकिने व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो। आलिताल क्षेत्रमा यसबर्ष करिब १० वटा सोलार वत्ती जडान गर्ने काम सम्पन्न गरिने छ। तालको छेउमा चिया, कफी सप, चिसो पेय पदार्थसंगै खाना र खाजाको प्रबन्ध गरिने र पर्यटकहरुलाई राती बस्नका लागि क्याम्पहरु स्थापना गरिने अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए।
आलिताललाई रातीको समयमा अवलोकनसंगै क्याम्पिङ र फायर साइड बनाइने योजना अघि सारेको अध्यक्ष गुरुङको भनाई छ। यसअघि आलिताल क्षेत्रमा पिकनिक स्पटका लागि घरहरु निर्माण गरिएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो र मनमोहक आलितालमा हाल डुंगा सयर गर्न सकिन्छ। तालको चारैतिर पक्की फुटपाथ बनाइएको छ। ताल क्षेत्रमा साइकिलिङ पनि गर्न सकिन्छ। तालको अवलोकनका लागि भ्यूटावर पनि निर्माण गरिएको छ।
आलिताल धनगढी–डडेल्धुरा भिमदत्त राजमार्गको मध्य भाग डोटीको बुडरबाट करिब १८ किलोमिटर पश्चिम तर्फ पर्छ। बुडर–जोगबुडा सडकको पनि मध्य भाग गोदाम बजारबाट अढाई किलोमिटरको दुरीमा रहेको आलिताल पर्यटकीय सम्भावना बोकेको गन्तब्य हो।
हाल बुडर–जोगबुडा सडक कालोपत्रेको चरणमा छ। अहिले आलिताल नजिकैका गाउँमा होम स्टेका योजनाहरु पनि सञ्चालन गरिएका छन। कोरोना भाईरसको संक्रमण फैलिनु पुर्व आलीतालको अवलोकन गर्न दैनिक ४०–५० जना पुग्ने गरेका थिए। लकडाउन यता भने आलिताल भ्रमण गर्नेहरुको संख्यामा कमि आएको छ।
Previous articleडडेल्धुरामा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग बढ्यो–नेबी संघ
Next articleसीमामा सशस्त्रः कञ्चनपुरमा भन्सार छलिका सामान बरामद
शुक्लाफाँटा निकुञ्जले भन्यो,‘फिसिङ र क्याम्पिङ ‘नो’, जंगल र वाक सफारी ‘ओके’
असोजमा खप्तड [ तस्बिरहरु ]
धार्चुला-लिपुलेक माथि उड्दा